XOG: Magacyada & Darajooyinka ay hayeen Saraakiishii Itoobiya ka socotay ee tagtay Kismaayo shalay.
August 15, 2019 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dalbaday dawladda Itoobiya in ay ka caawiso sidii xukuumaddiisu ugu guuleysan lahayd doorashada Jubbaland, qof taageersana uga soo bixi halkaas, si taas looga dhabeeyana ay muhiim tahay in faragalin lagu sameeyo doorashada Jubbaland.
Ilo Sirdoon oo ay heshay Warsidaha Puntlandtimes.com waxay cadeynayaan in uu jiray wada hadal telfoon oo lahelay, kaas oo dhexmaray Madaxweyne Farmaajo & Raysalwasaare Abiy Ahmed, waxayna ka wada hadlayaan arrimaha Jubbaland.
Xogta ayaa daaha ka rogeysa in Madaxweyne Farmaajo ka codsanayo Itoobiya in laga dhabeeyo balantii horey loo galay, gaar ahaana marka laga hadlayo arrimaha dawlad gobaleedyada oo ay dhinacyadu mawqif mideysan horey uga qaateen.
Itoobiya waxay Kismaayo u dirtay Saraakiisha liiskoodu hoos ka muuqdo, kuwaas oo la siiyey amaro ku wajahan xaaladda in ay soo qiimeeyaan, waxayna kala ahaayeen.
Maj Gen, Zawde Taliyaha ciidamada Barriga Itoobiya ee kusugan xaduudaha Soomaaliya, mudo dheer ayuu howlaha ciidamada ku jiraa waana mid kamid ah saraakiishii Soomaaliya gashay 2006-dii.
Gen, Demise Kuxigeenka Madaxa Sirdoonka Milateriga Itoobiya,kasokow jagadaas uu ku magacaaban yahay haddana wuxuu saameyn ku leeyahay qeybta howlgalada deg deg ah.
Gen, Gabresalasie, waa sirdoon firfircoon wuxuu ka shaqeeyey Soomaaliya, Kenya iyo dalal kala duwan, wuxuuna inta badan ku foogan yahay oo hoos-yimaada sirdoonka Itoobiya ee kusugan gudaha Soomaaliya.
Lt Cornel, Ali Jama waa Khabiir Hoggaaminta ciidamada iyo Sirdoonka Milateriga ah, wuxuuna horey qeyb uga ahaa howlgalkii qabashada Cabdikariim Muuse Qalbi-Dhagax.
Shariif Hussein, waa Turjumaan iyo siyaasi kasocda Safaaradda Itoobiya ee Muqdisho
Talaabada ay Madaxtooyada Soomaaliya waqtigan taageerada uga raadisay Addis Ababa, ayay dad badan u arkaan god siyasadeed uu ku dhacay Madaxweyne Farmaajo oo ay dad badan shalay u arkayeen wadani jecel Soomaali-nimada kana soo horjeeday faragalinta Shisheeye.
Kan meelaha wax ku qora waxaa ku dhacay cudur Madaxweyne Farmaajo! ”
Waa mayseerkii Ayaadadaa u dhimatay, Allaha ku caafiyo.